Puntland: Xilldhibaano ka hadlay mudda kororsiga Xukuumadda [DAAWO]
GAROOWE, Puntland - Iyadoo mudooyinkii dambe ay sii xoogeysanayeen wararka ku saabsan in maamulka Cabdiwali Maxamed Cali [Gaas] uu ku fekerayo inuu dhameysto mudado kororsi ayaa waaa ka hadlay Xilldhibaanada Aqalka Wakiilada.
Xilldhibaanadaan oo wariyaasha uwaramay kadib furitaankii Kaldhiga 41aad ee Golaha Sharci Dejinta ee Puntland, ayaa fekerado kala duwan ka dhiibtay wararkaan leysla dhexmarayo.
Qaar kamid ah Xilldhibaanada waxay cod dheer ku sheegay inaanu jiri doonin mudo korosi ay sameysato Xukuumadda hadda taladda haysay, islamarkaana doorashada dhici doonta waqti loo mudeeyay.
Mudanayaal kale, ayaa waxay dhankooda sheegeen in aysan ka dhici doonin Puntland wax doorasho ah, iyagoona qiil uga dhigay xaaladda hadda ku jiro maamulka ah oo ah dagaalo.
"Inaga waxaan waxaan nahay hay'addo dowladeed kuma shaqeynayo wararka Fadhi ku diri-yadda laga sheego, doorashadda waqtigeeda ayey ku dhaceysaa," mid kamid ah Xilldhibaanada ayaa sidaas yiri.
Hadalka Xilldhibaanada ayaa wuxuu kusoo beegmayaa maalin un kadib markii Madasha Puntland Focous Group oo ay ku mideysan yihiin Siyaasiyiin iyo Murashixiin ay ka digeen dib udhac ama modo kororsi.
Madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali [Gaas] kuma uusan soo hadal-qaadin Khudbadii uu maanta ka jeediyay furitaankii Kalfadhiga 41aad ee Aqalka Wakiilada Puntland oo maanta dhacday, wararkaan leysla dhexmaray.
Doorashadda maamulka Puntland oo sanadkaan ka xiiso iyo xamaasad badan sanadihii hore ayaa waxaa loo madalsan yahay qabsoonto bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2019-ka.
Amarro la duldhigay Gaadiidka isaga kala goosha Garoowe iyo Tukaraq
Puntland 22.05.2018. 09:47
Go'aankan ayaa kusoo beegmaya xilli Puntland ay ku jirto diyaar-garowga dagaal ka dhan ah Somaliland...
Gollaha Wasiirada Puntland oo Shir deg deg ah ka leh Xaaladda Tukaraq
Puntland 19.05.2018. 12:11
Somaliland oo Go'aan cusub kasoo saartey colaadda Tukaraq
Somaliland 20.05.2018. 09:58
Muuse Biixi oo dalbaday in Wadahadal lagu xaliyo colaadda Sool [DAAWO]
Somaliland 26.06.2018. 16:49
Taliye ku xigeenka Booliska Puntland oo la dhaawacay
Puntland 04.05.2018. 14:33
Somaliland oo ka hadashay doorka Beesha Caalamka ee Colaada Tukaraq
Somaliland 12.06.2018. 23:40
Sheekh Shariif oo si kulul uga hadlay Colaada Tukaraq, Baaqna diray
Soomaliya 28.05.2018. 11:34
Puntland oo markale ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Somaliland
Puntland 19.08.2018. 13:56
Haweenay Xildhibaan ah oo gashay shil Baaskiil lana Isbitaal la dhigay 20.07.2019. 01:55
Iran oo qabsatay maraakiib nooca shidaalka qaada ah oo ay UK leedahay 20.07.2019. 00:59
Algeria oo hanatay tartanka kubadda cagta Qaramada Afrika 20.07.2019. 00:48
Koonfur Galbeed oo toogatay Shabaab "maleegayay" weeraro 20.07.2019. 00:23
Gobolka Soomaalida oo lagu qabtay hub fara badan iyo lacag 20.07.2019. 00:01
Puntland oo diiday guddigii Farmaajo ee wada hadalada Somaliland 19.07.2019. 22:04